सिन्धुपाल्चोकमा १६ वडा अध्यक्ष विजयी - ग्लोबलपाटी
२०७९ अषाढ २३, बिहिबार | Thursday, 07, Jul, 2022
Search for: in All Categoriesसमाचारदेश/प्रदेशसमाजराजनीतिविचार/ब्लगअर्थशिक्षास्वास्थ्यखेलकुदमनोरंजनविश्वफोटो कथा१२३४५६७कृषिपर्यटनअन्तर्वार्ताकला/साहित्यबाल संसाररोचकGNN TV Plusअपराधरोजगारसुचना/प्रविधिजीवनशैलीधर्म/संस्कृतिसम्पादकीयमुख्य समाचारENGLISH EDITION
१विश्व कीर्तिमानी सिन्धु पुत्र तामाङको निधन
२बानियालाई ‘बेस्ट नवमोडल २०७९’ अवार्ड प्रदान
३आफ्नै प्रतिबद्धताको खिलाफमा जनप्रतिनिधिः नजर सुविधामा मात्रै
४माओवादीमा सिन्धुबाट ८ केन्द्रीय सदस्य, तीन वैकल्पिक
५कृषकलाई अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण
६जनप्रतिनिधिलाई भू–उपयोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण
७विपदबाट बँच्न पूर्वतयारी
८समाज विकासको बाधकमा ‘महिला हिंसा’
सिन्धुपाल्चोकमा १६ वडा अध्यक्ष विजयी
ग्लोबलपाटीप्रकाशित मिति: २०७९ जेष्ठ १, आईतबार (१ महिना अघि)
१४२९ पाठक संख्या
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकमा जारी मतगणनाबाट १६ वटा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका ९, एमालेका ५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १ वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।
आईतबार विहान ५ बजेसम्मको मत परिणाम अनुसार बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं. १ को वडाध्यक्षमा कांग्रेसका आङदोर्जे शेर्पा प्यानलसहित निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै वडा नं. २ को वडाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार रेशम तामाङ बिजयी भएका छन् । उनले एमाले उम्मेदवार जितबहादुर तामाङलाई ८२ मतान्तरले हराए । रेशमले ७ सय ६ मत पाउँदा जितबहादुरले ६ सय २४ भोट ल्याए । रेशमको प्यानलै बिजयी भएको हो । बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं ३ को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस जीवन भण्डारी विजयी बनेका छन् ।
हेलम्बु गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले खाता खोलेको छ । हेलम्बु– १ को वडाध्यक्षमा १ हजार तीन मत ल्याएर कांग्रेसका दावा ग्याल्जेन लामा निर्वाचित भए । उनले एमाले उम्मेदवार अनिल लामालाई हराए । उनले ५ सय ९६ मत मात्र पाए । हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं ७, नेपाली कांग्रेस निलबहादुर खड्का विजयी बनेका छन् । उनले ६ सय ६६ मत ल्याएका थिए ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा प्यानलसहित वडाध्यक्ष जित्दै कांग्रेसले खाता खोलेको छ । त्रिपुरासुन्दरी– १ मा सीताराम थापा ३ सय ३४ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादीका हरेराम तिमिल्सिनाले २ सय ७९ मत ल्याए । त्रिपूरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नं २ मा नेपाली कांग्रेसका रमेश राउत विजयी बनेका छन् । त्यस्तै जुगल गाउँपालिका– १ को वडाध्यक्ष कांग्रेसका जनक लामा बिजयी भएका छन् । उनले ५ सय ८४ मत ल्याएका थिए । बलेफी गाउँपालिका वडा नं १, नेपाली कांग्रेसका हुपबहादुर खड्काले ६ सय ७९ मत ल्याएर विजयी बने ।
नेकपा एमालेले भने चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा पहिलो खाता खोलेको छ । वडा नं. ३ का उम्मेद्वार टेकबहादुर तामाङको प्यानल नै विजयी भएको छ । तामाङले ५ सय ५४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने तामाङका प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका उम्मेद्वारले ५ सय १९ र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले ४ सय ६ मत प्राप्त गरेका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. २ मा एमालेबट सुदिप श्रेष्ठको प्यानल नै विजयी भएको छ । यस्तै इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. १ मा एमालेका चिनलाल तामाङ विजयी बनेका छन् । जुगल गाउँपालिका वडा नं २ मा एमालेका चन्द्रकाजी लामा र हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. ६ मा एमालेका सन्चबहादुर तामाङ विजयी बनेका छन् ।
नेकपा (माओजादी केन्द्र) ले लिसंखुपाखर गाउँपालिकाबाट पहिलो खाता खोलेको छ । वडा नं १ का नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार पाशाङलाल लामा विजयी बनेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पनि एक उम्मेद्वार विजयी बनेका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. १ बाट युवलाल श्रेष्ठ ५ सय ७५ मतले विजयी बनेका हुन् ।
विश्व कीर्तिमानी सिन्धु पुत्र तामाङको निधन
बानियालाई ‘बेस्ट नवमोडल २०७९’ अवार्ड प्रदान
आफ्नै प्रतिबद्धताको खिलाफमा जनप्रतिनिधिः नजर सुविधामा मात्रै
माओवादीमा सिन्धुबाट ८ केन्द्रीय सदस्य, तीन वैकल्पिक
पूर्वसांसद् कर्मचार्यले छाडे एमाले (कस्ले के भने ?)